पोर्चुगल जान कहाँ सम्पर्क राख्नुपर्छ र कति खर्च लाग्छ ?
Thu, Aug 06, 2020 | 01:20:19 NST
प्रश्न : म पोर्चुगल जान चाहन्छु । त्यहाँ जान कहाँ सम्पर्क गर्नुपर्ला ? पोर्चुगलमा के कस्तो काम पाइन्छ र जान कति खर्च लाग्छ ?
उत्तर : दिवस आचार्य, निर्देशक वैदेशिक रोजगार विभाग - पोर्चुगलको सम्बन्धमा केही समयअघि केही म्यानपावर कम्पनीबाट पत्रपत्रिकाबाट विज्ञापन छापिएको पनि देख्नुभयो होला ।
तीनै विज्ञापनका आधारमा सम्बन्धित अनुमति प्राप्त व्यवसायिहरुसँग गएर सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ । त्यसमा लागत खर्च भनेको हवाइ टिकट वाहेक ६५ हजार मात्रै हो । त्यो भन्दा बढि तिर्ने अवस्था आयो भने विभागमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ ।